< အစားအစာတွေကျန်းမာရေးနဲ့ညီဖို့ကနံပါတ်တစ်! Vs ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးသက်သာဖို့ကအရေးကြီးဆုံး! > နှစ်ယောက်ထိပ်တိုက်တွေ့ကြရာဝယ် …… | yathar Magazine
မိတ်ဆွေ! မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ချရတဲ့ငရုတ်သီး နဲ့ စိတ်မချရတဲ့ငရုတ်သီးတွေအတူတူ
ရောနှောရောင်းချနေတာ သင်သိပါသလား? မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သာမာန်အားဖြင့်ရောင်းချနေပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အသေးစိတ်မစဉ်းစားဘဲ ရောင်းနေတဲ့ငရုတ်သီး တွေကအများအပြား! အဲ့ဒီထဲကမှ သေချာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအဓိကထားတဲ့ ငရုတ်သီးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ “Natural Farm Fresh Myanmar Co., Ltd.”
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ “Natural Farm Fresh Myanmar Co., Ltd.” မှစားသုံးသူတွေအပေါ် ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေပေးနေလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
ငရုတ်သီးကိုအခြေခံပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ Super Hero !
ငရုတ်သီးကိုစားသုံးသောမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစားအစာနှင့်ကျန်းမာရေးစောင်ရှောက်ဖို့ကအဓိကတာဝန်။ ကမ္ဘာပေါ်က Natural Farm Fresh Myanmar Co., Ltd. မှာအရောင်းမန်နေဂျာ တဖြစ်လဲ နေထိုင်လှုပ်ရှားနေတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက် လူသား !
မကျန်းမာမှုတွေကိုအဓိကထားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ Dark Hero!
သာမာန်အချိန်မှာ စားသောက်ဆိုင်ရှင်နှင့်ဧည့်သည်တွေကို ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ yathar ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အရောင်ဝန်ထမ်း။ ဒီတကြိမ်မှာသူဌေးရဲ့ဖိအားပေးချက်အရ လူကြမ်းနေရာကဇာတ်ဆောင်။ #လက်တွေ့ရိုက်ကူးရေးနေ့မှာတော့ အရမ်းကိုတက်ကြွနေခဲ့သူ။
ငရုတ်သီးလူသား: ငရုတ်သီးဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတွေနေ့တိုင်းလိုလိုစားသုံးနေတဲ့အစားအစာထဲမှာအပါ မဖြစ်ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခု။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေအမြဲစားသုံးနေတဲ့ငရုတ်သီးတွေထဲမှာ အသည်းရောဂါဖြစ်စေ နိုင်တဲ့ မှိုဆိပ်နှင့်ဆိုးဆေးတွေပါဝင်နေတာ သင်သိပါသလား?
ဆန့်ကျင်ဘက်လူသား: နားညည်းတယ်! နားညည်းတယ်! စိတ်ချရတဲ့ အစားအစာဆို မြန်မာမှာမလိုအပ်ပါ ဘူးဗျာ။ ပုံမှန်သုံးနေကျ ငရုတ်သီးကိုနေ့တိုင်းသုံးနေတာ ကျန်းမာနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလား! အဲ့လိုတွေပြော ပြီး ကုမ္ပဏီကငရုတ်သီးကိုဝယ်သုံးခိုင်းဖို့လုပ်နေတာမလား!
ငရုတ်သီးလူသား : သင်ကဘာမှမသိနားမလည်တာဘဲ….. မြန်မာပြည်မှာ သေဆုံးမှုရဲ့ ၇%ခန့်က အသည်းကင်ဆာ၊ အသည်းရောဂါ နဲ့ဆိုတာသိလား။ အဲ့ဒါတွေက သာမာန်ရောင်းနေတဲ့ငရုတ်သီးတော် တော်များများမှာ မှိုဆိပ်နှင့် ဆိုးဆေးတွေကအကြီးမားဆုံးသောအရင်းအမြစ်ထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ် လို့ပြသနေတဲ့နံပါတ်ပဲ။
ဆန့်ကျင်ဘက်လူသား : ကောင်းပြီ….. ငရုတ်သီးလူသား။ ဒါဆိုနားထောင်ကြည့်မယ်လေ။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ငရုတ်သီးအများအပြားမှာ မှိုနဲ့ဆိုးဆေးတွေပါနေတာသိနေကြတာပဲ။ အဲ့ဒါတွေမပါတဲ့ ငရုတ်သီးကို ထုတ်လုပ်ဖို့ကလဲခက်ခဲတယ်မလား? အသင့်ဆီမှာ မပါအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းပညာ ရှိလို့ပြောနေတာလား?
ငရုတ်သီးလူသား : ဒါဆိုရင်သင်ဟာ “Natural Farm Fresh Myanmar Co., Ltd.” ရဲ့ငရုတ်သီး(ဦးစပ်ကြီး) အကြောင်းမသိသေးတာ သေချာနေပြီပဲ။ ဗဟုသုတနည်းတဲ့သင့်ကို ဦးစပ်ကြီးအကြောင်းရှင်းပြပေးရ မှာပေါ့။
အခြားသောဈေးကွက်ထဲကအခြောက်ခံထား သော ငရုတ်သီးကိုအသုံးမပြုဘဲ အကောင်းဆုံးနဲ့ အရည်အသွေးပြည့်ငရုတ်သီးအစိုကိုရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်း။
ပထမဆုံးရေဖြင့်သေချာဆေးကြောမှုပြုလုပ်ပြီး နောက်တကြိမ်ရောဂါပိုးမွှားနှင့်အနုဇီဝပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်ဖို့ ရေဆူအမှတ်မှာရေနွေးဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောခြင်း။
©︎2019 Natural Farm Fresh Myanmar Co., Ltd.
မြေကြီးပြင်ပမှာအခြောက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ပဲ အင်းဆက်တောင်မနေနိုင်တဲ့ Solar Dryer ထဲမှာဗန်းတွေ နဲ့အခြောက်ခံပြီး ငရုတ်သီးရဲ့ရေခိုးရေငွေ့ပမာဏ ၈% အောက်ရအောင် အခြောက်ခံခြင်း။
စားသုံးသူတွေဆီပို့ဆောင်ချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှအညစ်အကြေးများမပါဝင်စေရန် လေလုံဘူးများဖြင့် ထည့်ပြီးထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း။
ဒါ့အပြင် မှိုဆိပ်နှင့်ဆိုးဆေးများမပါဝင်ကြောင်းကိုအာမခံနိုင်ဖို့ ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ပြီးစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်း။ ကျန်းမာရေးတခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို သေချာစစ်ဆေးထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ငရုတ်သီးရဲ့မူလ အနံ့၊ အရသာကိုမပြောင်းလဲရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းမှကောင်း။ ပိုမိုပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့ အရသာရရှိနိုင်အောင် တခုခြင်းတခုခြင်းအသေးစိတ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလုပ်ဆောင်နေခြင်း။
ဒါကြောင့် ဦးစပ်ကြီးရဲ့ ငရုတ်သီးမှာ မှိုဆိပ်နှင့်ဆိုးဆေးတွေ မပါဝင်ပါ။
ဒီအထောက်အထားကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ညာဘက်ကပုံမှန်ဈေးကွက်ထဲက ငရုတ်သီး၊ ဘယ်ဘက်က ဦးစပ်ကြီးက ငရုတ်သီးကို တစ်လနီးပါး သိမ်းဆည်းထားတဲ့ပုံပါ။ အရောင်၊ အရည်အသွေး၊ မှို ကြီးထွားလာပုံကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ယုံနဲ့ သိသာပေါ်လွင်နေတယ်လေ။
ဆန့်ကျင်ဘက်လူသား : ဒါ ဒါဆိုရင်! ? ဈေး _ ဈေးနှုန်းကရော! ဒီလိုအသေးစိတ်လုပ်ဆောင်တာဆိုတော့ ကုန်ကျစရိတ်ကများမှာပေါ့ _ တခြားငရုတ်သီးဈေးနှုန်းတွေထက်လဲ မြင့်နေမှာပေါ့ ? ? ?
ငရုတ်သီးလူသား : ဟုတ်တယ်_ ပုံမှန်ဒီလိုပုံစံကုမ္ပဏီကပစ္စည်းဆို ဈေးကြီးမှာသေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဦးစပ်ကြီး ငရုတ်သီးက သင့်တင့်မျှတတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေပါတယ်။
အပုအနုမှုန့် (၈၀၀ ဂရမ်) – ၁၀၀၀၀/- ကျပ်
မိုးထောင်ခွဲကြမ်း (၈၀၀ ဂရမ်) – ၇၅၀၀/- ကျပ်
မိုးထောင်အကျက်မှုန့် (၈၀၀ ဂရမ်) – ၈၀၀၀/- ကျပ်
#အထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများသည် လက်လီဈေးနှုန်းများဖြစ်သည်။ လက်ကားအနေဖြင့်ဝယ်ယူလိုသော မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်မှတဆင့်မေးမြန်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ငရုတ်သီးလူသား : အားလုံးအတွက် Natural Farm Fresh Myanmar Co., Ltd. က မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်! ဆိုတာကို နှလုံးသွင်းပြီး နွေးထွေးတဲ့စိတ်ထားများဖြင့် ၀န်ထမ်းများက မိသားစုသဖွယ် ဖွဲ့စည်းပြီး နေ့တိုင်း မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုစိတ်ချရစေ ရန်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးဝန်ထမ်းများကလည်း ငရုတ်သီးအရောင် တူညီဝတ်စုံ များဖြင့် အမြဲတမ်းစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ငရုတ်သီးများထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စဉ်းစားနေခြင်း။ ထိုအရာများက ဦးစပ်ကြီး ငရုတ်သီးရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ စေတနာ !
လူကြီးမင်းများ ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ? Natural Farm Fresh Myanmar Co., Ltd. ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေက 「ယုံကြည်စိတ်ချ」「အရည်အသွေးပြည့်」「အရသာပြည့်မှီ」တဲ့ ငရုတ်သီး။ မြန်မာနိုင်ငံကစားသောက်ဆိုင် များက ဒီငရုတ်သီးကိုအသုံးပြုပြီး အပြင်အစားအသောက်တွေစားသုံးရာမှာ ပိုမိုစိတ်ချပြီးအရသာရှိတာတွေ စားသုံစေချင်ပါတယ်။ အိမ်မှာချက်ပြုတ်စားသောက်ရာမှာလည်း အမေများက ဒီလိုငရုတ်သီးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ yathar မှလည်း အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Natuarl Farm Fresh Myanmar Co., Ltd. ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ဦးစပ်ကြီး ငရုတ်သီး။ ယခုဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီး စိတ်ပါဝင်စားသော စာဖတ်ရှင်များ အောက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာမှတဆင့် yathar Magazine မှဖတ်ရှုပြီး ဆက်သွယ်တာပါလို့ပြောပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။
ကြိမ်းသေ တကြိမ်တခါလောက်စမ်းသပ်သုံးစွဲချင်သူများကိုလည်း လက်ဆောင်အထုပ်ငယ်လေးများကို ပေးဝေလျက်ရှိပါတယ်။
Yathar Magazine မှာဖတ်ပြီး ဆက်သွယ်တာပါလို့မှာပြောပြီးမှာယူပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
ဖုန်း – ၀၉၉၅၁၂၄၃၅၇၃ / ၀၉၇၆၀၇၄၆၇၃၉
တာဝန်ခံအမည် – မဝေနှင်း